Izindaba - Imakethe yeMethionine ihamba ebangeni eliphansi
Esikhathini esizayo esiseduze, imakethe ye-methionine ibisebenza ngaphakathi kwebanga lomlando, futhi isanda kuphuma. Intengo yamanje i-RMB 16.5-18 / kg. Umthamo omusha wokukhiqiza wasekhaya ukhishwa kancane kancane kulo nyaka. Ukuthengwa kwemakethe kugcwele futhi ibanga eliphansi lizulazula. Izingcaphuno zemakethe zaseYurophu zehle zaya kuma-euro angu-1.75-1.82 / kg. Kuthintwe amanani entengiselwano abuthaka nokukhula komkhiqizo wasekhaya, ukungeniswa kwe-methionine kwehlile ezinyangeni ezedlule.
Kusukela ngoJanuwari kuya kuJulayi 2020, ukungeniswa kwe-methionine ezweni lami kwehla ngo-2% unyaka nonyaka
Ngokwezibalo zamasiko, ngoJulayi 2020, izwe lami lingenise amathani ayi-11,600 wemikhiqizo eqinile ye-methionine, ukwehla kwenyanga nenyanga kwamathani ayi-4,749, ukwehla konyaka ngamathani ayi-9614.17, ukwehla ngo-45.35%. NgoJulayi 2020, izwe lami lingenise amathani ayi-1,810 emafemini aseMalaysia, ukwanda kwamathani ayi-815 inyanga nenyanga nokwehla konyaka ngamathani ayi-4,813. NgoJulayi, ukungeniswa kwezwe lami okuvela eSingapore kwehle kakhulu kwaba ngamathani ayi-3340, ukwehla kwenyanga ngenyanga kwamathani angama-4840 nokwehla konyaka ngamathani ayi-7,380.
Kusukela ngoJanuwari kuya kuJulayi 2020, ukungeniswa kwe-methionine ezweni lami kufinyelela kumathani ayi-112,400, kwehla ngo-2.02% unyaka nonyaka. Amazwe amathathu aphezulu yiSingapore, iBelgium neMalaysia. Phakathi kwabo, ukungeniswa kwempahla okuvela eSingapore kube nesilinganiso esiphakeme kakhulu, ngokungeniswa okuqoqiwe kwamathani angama-41,400, abalwa ngama-36.8%. Kulandelwa iBelgium, inani lokungenisa eliqongelelwe ukusuka ngoJanuwari kuya kuJulayi kwakungamathani ayi-33,900, ukwanda konyaka ngonyaka ngama-99%. Umthamo wokungenisa oqoqiwe ovela eMalaysia wawungamathani ayi-24,100, wehla ngama-23.4% unyaka nonyaka.
Imboni yenkukhu iyaqhubeka nokulahlekelwa yimali
Lapho ukunwetshwa kwemboni yezinkukhu kuhlangana nomqedazwe omusha womqhele, ukusebenza kahle kokufuya izinkukhu kuyavilapha. Kulo nyaka, abalimi balahlekelwe isikhathi esiningi. Intengo emaphakathi yezinkukhu zezinkukhu ezidayiswayo yi-3.08 yuan / kg, yehle ngama-45.4% unyaka nonyaka kanye nama-30% unyaka nonyaka. Umqedazwe we-swine fever wase-Afrika unendawo elinganiselwe yokusetshenziswa kanye nokukhula kwesidingo semakethe okubuthakathaka. Akukhona nje ukuthi ama-broiler namaqanda alahlekelwa yimali, kepha amadada enyama nawo awanathemba. Muva nje, uFeng Nan, uNobhala-Jikelele we-Poultry Industry Branch ye-Shandong Animal Husbandry Association, uthe isibalo samanje samadada embonini yamadada ezweni lami siphakathi kwezigidi eziyi-13 nezili-14, esidlule kakhulu ibhalansi yokuphakelwa kanye nokufunwayo . Ukweqisa ngokweqile kubangele inzuzo yemboni ukwehla, kanti imboni yedada isesimweni sokulahleka kulo lonke uchungechunge lwemboni. Ukwehla kokufuywa kwezinkukhu akulungele ukufunwa, futhi imakethe ye-methionine iyehla.
Ukufingqa, yize umthamo wokungenisa we-methionine wehlile ezinyangeni ezedlule, kusanda kubikwa ukuthi isitshalo semethionine saseMelika simise ukukhiqizwa ngenxa yesiphepho saseMelika. Kodwa-ke, umkhiqizo wabakhiqizi basekhaya ukhuphukile, izingcaphuno zabakhiqizi zibuthakathaka, ukusebenza kahle kokufuya izinkukhu kuyavilapha, kanti ukunikezwa kwe-methionine kugcwele futhi kubuthakathaka besikhashana Kunzima ukukushintsha.
Isikhathi Iposi: Oct-26-2020
Ukudla Kwezilwane, L-Threonine Ibanga Lokudla, L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Pharm Ibanga, I-Pharm Grade L-Leucine,